အဝေးကလူ ရဲ့ စိတ်စေရာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အဝေးကလူ ရဲ့ စိတ်စေရာ…
အဝေးကလူ ရဲ့ စိတ်စေရာ…
Posted by Ma Ei on Mar 20, 2012 in Arts & Humanities | 23 comments
အဝေးကလူ ရဲ့ စိတ်စေရာ
ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာ စိတ်၏စေစားရာအတိုင်း ရှင်သန် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးကတော့ အဆိုတော် ပန်းချီဆရာ ခင်ဝမ်း ဖြစ်ပါတယ်…
MG ရဲ့ ကိုပေါက် ကတော့ ခင်ဝမ်းရဲ့ သီချင်းတွေအကြောင်းကို အပိုအလို မရှိပြည့်စုံအောင် ဒီလို ရေးဖွဲ့ ပေးထားပါတယ်…
…..ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ကျနော်ရင်ထဲကို စူးနစ်စွာရောက်လာဘူးတဲ့ (ခင်ဝမ်း)ကစရမယ်ထင်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ အားလုံးကိုနုတ်ဆက် လူလောကကြီးကိုစွန့်ခွာလို့တမလွန်မှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေရေးဖွဲ့သီဆိုနေအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။…
ကျွန်မ ကတော့ သီချင်းတွေအပြင် ပန်းချီကားတွေကိုပါ ခံစားခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်…
ပန်းချီဆရာ ခင်ဝမ်းရဲ့ 4’ X 14’ ပန်းချီကားချပ်ကြီး 8 ချပ်ကို Lobby မှာ ချိတ်ဆွဲ အလှဆင်ထားတဲ့ နေရာမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရနေလို့ဖြစ်ပါတယ်…
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ သဘာဝရဲ့ အလှတွေကို အနုပညာနဲ့ ရှုမြင်ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေပါ…
စုတ်တံ မသုံးဘဲ မှုတ်ဆေးဘူး များကို အသုံးပြုရေးဖွဲ့ထားပါတယ်…
2.ပန်းချီကား4ချပ်
3. ပန်းချီကား4ချပ်
အမည်ပေးမထားသော ပန်းချီကားချပ်များရဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ပြောကြည့်မယ်နော်…
7.ကချင် မနော အလှ
ပန်းချီကား 8 ချပ် အပ်လိုက်ပေမဲ့စိတ်၏စေစားရာအတိုင်း ရှင်သန် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်လို့
သတ်မှတ်ရအောင်ကို စိတ်ဝင်စားမှ ဆွဲပေးတာကို စောင့်ခဲ့ရပါတယ်…
ပန်းချီကားအပြီးသတ် ဆေးတစ်ချက်မှုတ်လေးတောင် သူ ကြည့်နေတာ အကြာကြီးပါဘဲ…
သူ့ရဲ့ ပန်းချီကားတွေ အခြားနေရာမှာရှိနေနိုင်ပေမဲ့ ဒီလိုကြီးမားတဲ့ပန်းချီကားတွေတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး…
အနုပညာနဲ့သာ ဘ၀ကို ရှင်သန်စေခဲ့ပြီး စိတ်တိုင်းကျ ဘ၀ကို နေသွားတဲ့သူမို့ အဝေးကလူ ရဲ့ စိတ်စေရာကို
ညွှန်းဖွဲ့အားကျစကား ဆိုခဲ့မိကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်…
ခင်ဝမ်းရဲ့ သီချင်းတွေအကြောင်းကို အပိုအလို မရှိပြည့်စုံအောင် ရေးဖွဲ့ ပေးထားတဲ့
Comment ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသော ကိုပေါက် အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်…
ခင်ဝမ်းရဲ့ မမသီချင်းဘွဲ့ကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့ပါတယ်…
သူ့ရဲ့ပန်းချီကားတွေကို တိုင်းတပါးက လူမျိုးခြားတွေကပါ အရမ်းနှစ်သက်ကြတာပါ….
ဒါပေမဲ့ မွန်ကစ် က ညလေး အရွယ်လေ….
ခင်ဝမ်းရဲ့ ဆော်လမွန်ငါးတို့အပြန်၊ တောင်ပေါ်ဆရာမလေး၊ ဧရာဝတီတို့ကိုကြိုက်တယ်၊ ခင်မောင်တိုးသီချင်းတွေရေးတဲ့ ဆရာ အဉ္ဇလီမောင်မောင်ကိုလည်း သတိရမိသွားတယ်..
ခင်ဝမ်းဆွဲတဲ့ ပန်းချီကားကို တွေ့တုန်းက အဆိုတော်အနေနဲ့ပဲ သိထားတာမို့ အံ့သြသွားတယ်။
ပန်းချီကားတွေကို သိပ်မခံစားတတ်လို့ မသိပေမယ့်…
ရောင်ခြည်ခ နဲ့ မမ ရေ…
ခင်ဝမ်း ကို အဆိုတော် အနေနဲ့ဘဲ သိကြတာများပါတယ်…
သူဆိုတဲ့ သီချင်းတွေကနှစ်သက်ဖွယ် သီချင်းလေးတွေပါ…
မအိ ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်လားသိ မေးကြည့်အုန်းမယ် ။ အမ ပန်းချီကား တခုချင်းစီကို အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တကားကို တပုံစီလောက်ရိုက်ပါလား ဟင်။ ကျမတခါမှ မမြင်ဖူးလို့ပါ။ အမအခုလို နာမည်ပေးတာလှတယ်။ ဒီပန်းချီကားတွေကို မြင်ရတာ အမ က မြင်နေကျမို့ နာမည်ပေးတတ်တာ ကျမ ကြည့်တာ အတော်ကြည့်ယူရတယ်။
ကျမ ကိုခင်ဝမ်း အကြောင်းကို သိပ်မသိပါဘူး။ အနုပညာနဲ့ပဲ ဘ၀တခုလုံးကို စိတ်တိုင်းကျ ပုံဖော်သွားတဲ့လူလို့တော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အမေနဲ့ အဖေကတော့ သူ့ကို ဖေးဘရိတ်ပါ။ သူ့သီချင်းတွေ အမေသိပ်ကြိုက်တာပါ။ အဖေမဆုံးခင်ကလည်း ခင်ဝမ်းတို့ ကိုထီးတို့ သီချင်းတွေ နဲ့ ဂစ်တာခေါက်နေကျတဲ့ ။ အမေ ပြောပြတာ။
Pooch လေးရေ – Pooch အဖေ ဆုံး ခဲ့တာ အခု မှသိရတယ်။
အရီး စိတ်မကောင်းပါဘူး သမီးရယ်။
Pooch က အမေ့ နားမှာ အားဖေးဖော် သမီးကောင်း လေးလို့ အရီး အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါထက်ပိုပြီး အောင်မြင် တိုးတက် ပါစေသမီးရေ။
Pooch လေးရေ …
အမြင့်မှာချိတ်ထားတာ ဆွဲရိုက်ရတာမို့ ပုံတွေသိပ်စိတ်တိုင်းမကျတာနဲ့
မတင်ဖြစ်တာပါ…ရွာထဲက ဓါတ်ပုံဆရာတွေကို မမှီဘူးလေ…
အမ Post လေးဖတ်မိပြီး အဖေကို သတိရအောင်လုပ်မိပြီကွယ်…
အမေ့ ကို ပိုဂရုစိုက်လိုက်ပါနော်…
သီချင်းလေးတွေ အတွက်၊ ခင်ဝမ်းအလွမ်းပြေ အတွက်၊ ပန်းချီဆရာမှန်း အခုမှ သိတဲ့ အတွက်၊ ပန်းချီကားလေးတွေ အတွက် အားလုံး ကို ကျေးဇူးပါ မအိရေ။
အိမ်ကို ပြန်ချင်နေတဲ့၊ အိမ်ပြန်ချိန် စောင့် နေကြတဲ့ အဝေးက ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အတွက် စာသားလေး။
ကျွန်မ လဲ လွမ်းပါတယ်။
တစ်ချိန်မှာတော့ လဲ အဝေးက ဆယ်လမွန်ငါး တွေ အိမ်ပြန်လာကြ ကောင်းပါရဲ့။
အပြန် – အပြန် – အပြန်….
မလတ်ရဲ့ Comment လေးတွေထဲမှာ စေတနာတွေ၊မေတ္တာတွေ
မိသားစုဝင်တွေအတွက်ပါ ဂရုတစိုက်ရှိလှတဲ့ မလတ်ရဲ့ စေတနာကို
အဝေးကပြန်လာကြမဲ့ ဆယ်လမွန်ငါးလေးတွေကိုလဲ ကြိုဆိုချင်ပါတယ်…
သူ့သီချင်းတွေကို အပုဒ်ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာနားထောင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ကျနော် သီချင်းတွေနဲ့ထမင်းစားခဲ့တဲ့1981-1991 ကာလမှာ ကူးပေးရမယ့်သီချင်းလစ်စ်ထဲမှာ
ခင်ဝမ်းပါရင် အဲဒီခွေကို ကျနော်ကူးတာပါဘဲ။
ခင်ဝမ်းရဲ့ခုနှစ်ပြည်ထောင် အဲဒီတုံးက ကျနော်ဟတ်ထိခဲ့တဲ့သီချင်းလေးပေါ့၊
“မင်းကို တွေ့ရချိန်မှာ ဘ၀ဟာပြောင်းသစ်လာတယ် နုယဉ်မင်းရဲ့အသွင်ဟာ အသဲကိုသိမ်းပိုက်ယူတယ် မြင်ရာလွန် လှလွန်း နှင်းတွေဝေလို့နေ
မင်းနဲ့တွေ့ရ ခုမှသိရ နတ်မိသက်ဆင်းည………………”
တကယ်လို့များ အခါအခွင့်သင့်ရင် ပန်းချီကားများကို မြင်တွေ့ခွင့်ရချင်ပါတယ်။
အခုလိုပန်းချီကားတွေတင်ပေးတဲ့ မအိကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Co., Lobby ကို အလှဆင်ဘို့အတွက် ပန်းချီကားမှာတဲ့အခါမှ
သူ့ သီချင်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရတာပါ…
ပန်းချီကား 8 ချပ်ကို 1997-1999 ထိ2နှစ် အချိန်ယူ ဆွဲပေးပါတယ်…
ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါ ကြုံရင်လာကြည့်ပါ…ဓါတ်ပုံလဲ ရိုက်ပါ…
နေရာက အိတုန်၊ မမ ၊ ET တို့ သိကြတယ်…
ကိုပေါက်ရဲ့ Comment ကြောင့် ဒီ Post ကိုတင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ဆင့်
ပန်းဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ အဆိုတော်
နဒီမင်္ဂလာ သီချင်းလေး တောင်နားထဲမှာ
ဒီလောကမှာ မပြောမဖြစ် ထည့်ပြောရတဲ့အနုပညာတစ်ခုပါပဲ
သူက မယ်ဒလင်ပါ တီးတတ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်.
ရေတွင်းကလေးကို ငုံကြည့်ပြီး နှင်းရေ့လို့ အော်ခဲ့တယ်…
ပြည်မှာ ဆောင်း …
သတိပြန်ရ ကြတယ်ဆိုလို့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်…
YIT ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ဦးလေးက ခင်ဝမ်းတို့ ခင်မောင်တိုးတို့ ပရိတ်သတ်ပေါ့…
ခင်ဝမ်းကို အဆိုတော် ပန်းချီသမားအပြင် ကဗျာကို ပါဠိလိုရေးတဲ့ ကဗျာဆရာလို့ပါသိရင် ပိုပြီး အံ့သြကြလိမ့်မယ်…
ကဗျာရေးတယ်လို့ သိရပေမဲ့ ပါဠိလိုကဗျာရေးတယ်ဆိုလို့
သူ့အကြောင်းတော့ နည်းနည်းကြီးမှ သိရတာရယ်..
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သူ့တွေ့ရင် ကြောက်လို့..
အဖေက ရီတယ်..သားရယ် ဦးခင်ဝမ်းကြီးက
ရုပ်ဆိုးဆိုးလူကြီးကို ကျွန်တော် တကယ်ကြောက်ခဲ့တာ..
သူက ကျွန်တော်တို့နဲ့ တစ်လမ်းကျော်မှာနေတာလေ..
နောက်တော့ …သူ့ရဲ့ စိတ္တဇပန်းချီစာအုပ်ကို ဖတ်မိပြီး
အန်တီအိရေ … အဲ့ဒီနေရာကို ရောက်ဖူးခဲ့ပေမယ့် …. ပန်းချီကားတွေကို သာမန်ကာလျှံကာလောက်သာ ကြည့်ဖြစ်ပြီး .. ဘယ်သူဆွဲခဲ့မှန်း … လုံးဝကို မသိခဲ့ပါဘူး … အဆိုတော် ခင်ဝမ်းဆိုတာလည်း .. ပန်းချီဆရာတစ်ဦးပါလားဆိုတာ .. အခုမှပဲ သိတော့တယ် … ။ ကိုကြောင်ဖက်ပြောသလို .. ပါဠိနဲ့ ကဗျာရေးတဲ့ ကဗျာဆရာဆိုတာသိရတာလည်း အံ့သြမိပါတယ် … ။
နောက်ထပ် လာကြည့်ပါ လို့ ဖိတ်ထားပါတယ်နော်…
ဦးခင်ဝမ်းကိုတော့ အဆိုတော်အနေနဲ့ သိတာပါ။ ပန်းချီပညာရှင်ပါ သိလိုက်ရတော့ အတော့်ကို ပါရမီကုသိုလ်ထူးတဲ့ လူတစ်ဦးအဖြစ် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ လေးစားလည်း လေးစားမိပါတယ်။